Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Aviation » Cabsi? Duulimaadka Air India A320 ee Delhi ilaa Kabul
Wararka Afgaanistaan • Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Safarka • Wararka Dowladda • Wararka Hindiya • News • Dadka • Hadalka Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Air India A320 ayaa ka duulaysa Kabul kuna sii jeeday Delhi
Duulimaadka Air India Flight 243 Axaddii, oo ku shaqaynayay Airbus 320, ayaa ku socday diyaarad la qorsheeyay inay ka duusho Delhi, India, kuna sii jeeddo caasimadda Afghanistan ee Kabul. In kasta oo diyaaraddan xubinnimada Star Alliance ay ku sii jeedday oo ay ku soo dhowaatay, Kabul waxaa ka hor maray dagaalyahannada Taliban.
“Hawada sare ee Afgaanistaan ​​ayaa lagu dhawaaqay inay xiran tahay, marka ma jirto diyaarad halkaas ka hawlgeli karta. Duulimaadkii aan u qorsheynay Kabul sidoo kale ma aadi karo, ”ayuu yiri afhayeenka Air India.
Shalay, Duulimaadkii Air India ee 243 oo ka ambabaxay Delhi kuna sii jeeday Kabul 8:50 am waqtiga Hindiya ayaa xoogaa dib u dhacay markii ay la socotay 40 rakaab ah oo Afgaanistaan ​​ah oo saarnaa Airbus A320.
Waa duulimaad 2 saac iyo 5 daqiiqo ah oo ku socda dalka dariska ah ee Afghanistan. Ka dib markii ay ka soo tallaabtay xadka AI 243 bishii Ogosto 15 oo la filayay in la bilaabo, diyaaradda Air India waxaa lagu amray in ay xajiso oo ku wareegto 16,000 cagaha sare 90 daqiiqo oo kale ka hor inta aan loo oggolaan in ay soo degto.
Soo degitaanka ayaa mararka qaarkood dib u dhigi kara sababo la xiriira isgaarsiinta hawada oo liidata ee hawada Afghanistan.
Iyadoo dadka Hindida ay u dabaaldegayaan Maalinta Xorriyadda Axadda, Ogosto 15, Taliban ayaa ahayd abuuraya fowdo iyo argagax markii ay qabsadaan Kabul, caasimadda Afghanistan.
Dadka reer Kabul ayaa argagax ku habsaday markii ay soo baxeen warar sheegaya in Daalibaan ay magaalada hareereeyeen maalintaas. Dawladda Afgaanistaan ​​ayaa ka qaxaysay waddanka, magaalada lafteeduna waxay ahayd mid qasan.
Air India 243, a Star Alliance duulimaadka Air India, ayaa siday 6 shaqaale ah iyo 40 rakaab ah oo ka yimid Delhi kuna sii jeeday Kabul iyadoo aan la ogeyn in loo oggolaan doono inay soo degaan xitaa markii ay gaareen hawada Kabul. Diyaaradda ayaa lagu amray inay cirka ku wareegto sabab la’aan.
90kii daqiiqo ee xigay, Air India waxay cirka ku wareegtay joog dhan 16,000 fuudh. Duulimaadkii Air India ayaa la baxay shidaal diyaaradeed oo dheeraad ah. Duuliyaha khibrada leh ayaa ogaa in laga yaabo in dib u dhac ku yimaado soo degitaanka sababo la xiriira isgaarsiinta duulimaadka oo liita hawada Kabul mararka qaarkood.
Sida diyaaradda Hindiya, 2 diyaaradood oo kale oo shisheeye ayaa duulaya iyagoon fasax u haysan inay soo degaan. Marka laga soo tago in Talibanka ay magaalada qabsadeen, in Kabul ay ka hawlgasho diyaarad ayaa ah xoogaa caqabad ah.
Gegida dayuuradaha ee Kabul badiyaa waa “mashquul iyo daal” duuliyeyaasha ayaa leh. Intii lagu guda jiro sanadkaan, duulista magaalada waxay keenaysaa caqabad dheeri ah: dabayluhu waa xoog badan yihiin.
Diyaaradan oo ka kooban 160 kursi ayaa waxaa tijaabiyey Captain Aditya Chopra.
Ugu dambayntii oggolaanshaha ayaa la siiyay 3:30 pm xilliga maxaliga ah ee diyaaradda si ay u soo degto.
Si kastaba ha ahaatee, rakaabkii iyo shaqaalihii diyaaradda ayaa ogaa, in xaaladda siyaasadeed ee Kabul ay ka sii darayso. Xitaa ka dib markii ay diyaaraddu soo degtay, mid ka mid ah shaqaalihii diyaaradda ma uusan ka tagin qolkii diyaaradda, oo inta badan ku badan Kabul. Ka dib markii la sugay qiyaastii saacad iyo bar, duulimaadka Air India waxay raacday 129 rakaab ah waxayna mar kale u amba baxday Delhi.
Diyaaradda ayaa waxaa saarnaa shaqaalaha safaaradda Hindiya, mas’uuliyiin ka tirsan dowladda Afghanistan, ugu yaraan laba xildhibaan oo ka tirsan Afgaanistaan, iyo la -taliye sare oo u ahaa madaxweynihii hore Ashraf Ghani.
Qof rakaab ah ayaa sheegay inuu arki karo dad ku sugan gegida dayuuradaha ee Kabul oo quus ka taagan oo isku dayaya inay baxaan.
Isniintii, Air India waxay lahayd duulimaad u qorsheysnaa Kabul oo ka yimid Delhi 8:50 am. Markii hore waxaa dib loo dhigay 12:50 pm ka dibna waa la hakiyay kadib xiritaanka hawada Afghanistan kadib markii la soo saaray NOTAM - Notice to Airmen, ogeysiis rasmi ah oo ka kooban macluumaad ku saabsan howlaha duulimaadka.
Qaar ka mid ah rakaabkii saarnaa diyaaradda ayaa ka sheekeeyay inay “dareemi karaan xiisadda dhulka ka jirta,” laakiin ma cadda waxa ay ku saabsan tahay.
Waxaa jiray askar hareereysay dhabaha diyaaradaha. Waxaa sidoo kale jiray guux dhaqdhaqaaq hawadeed: C-17 Globemaster diyaaraddii milateriga ee milatariga iyo helikobtarradii Chinook ayaa duullimaadyo iyo dibedda u duulayay.
Waxayna arkeen diyaarado rayid ah oo ay leeyihiin Pakistan (PIA) iyo Qatar Airways oo la dhigay laamiga.
Kani waa, malaha, mid ka mid ah sawirradii ugu murugada badnaa ee aan ka arkay # Afgaanistaan. Dad quus ah oo laga tagay. Hay’ado samafal majiraan, UN ma jirto, dowladna ma jirto. Waxba. pic.twitter.com/LCeDEOR3lR